Deodorizer & freshener friji - Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
Ajụjụ FAUCI Deodorizer & Freshener Ajụjụ
Kedu otu esi eji ngwaahịa a?
Azịza: firstBuru ụzọ wepụ ihe nkiri aluminom nke ngwugwu ahụ, wee kwụọ ikuku maka nkeji 3. Dika nha friji na ịgbaso nkọwa ngwaahịa ahụ, wụsa ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke ihe dị n'ime granular n'ime ite cylindrical na obere dayameta. Mgbe ahụ, tinye mkpuchi iko cylindrical nke nwere dayameta buru ibu n'ahụ ahụ ite ahụ, pịa ya nke ọma ruo mgbe ụda "pịa" wee lelee ma ejikọtara ngwaahịa ahụ niile nke ọma. Ị nwere ike tinye ya na friji wee malite iji ya.
② Mgbe elekere 5 gachara, mepee friji na isi na -emebi emebi na isi ga -apụ n'anya. Ọ bụrụ na a ka nwere isi na -egbu egbu n'oge a, ị nwere ike wepụta ite ahụ, were otu aka jide mkpuchi elu ya, wee were aka nke ọzọ na -atụnye akụkụ ala nke ite ahụ, tụgharịa ya azụ. n'ahịrị kwụ ọtọ tinyere dayameta ahụ ugboro ole na ole (ọ bụghị na -atụgharị ala ma na -atụgharị) ikewapụ mkpuchi na ahụ iko. Dị ka ọnọdụ nke gị siri dị, belata ụfọdụ ihe ndị dị n'ọkụ ma werezie mkpuchi wee tinye ya n'ime friji ọzọ.
Kedu ka ngwaahịa a si adị ọhụrụ ma na -esi ísì?
Azịza: Ọ dị iche na ihe na -esi ísì ụtọ ma ọ bụ ngwaahịa na -esi ísì ụtọ, FAUCI friji Deodorizer & Freshener na-eji ihe mkpuchi ụlọ arụnyere ka ọ hapụ ifịk ifịk gaseous dị ọcha wee fesaa ya na friji. A na -egbu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nje bacteria na ebu niile, na oge ọ bụla iji gbochie mmụba na ọmụmụ nke nje ọhụrụ na ebu, ka ha wee nweta mmetụta nke ichekwa nri na iwepụ isi na -esi ísì.
Chlorine dioxide bụ ọgbọ ọhụrụ amaara nke ọma nke na-eme ka ọ ghara ịdị irè. Dị ka ihe nchekwa dị mma, ejirila ya mee ihe n'ọtụtụ nhazi nri, nkwakọ ngwaahịa, nchekwa na njem;
Ụdị oxygen ROS na -arụ ọrụ na -ezo aka na ikuku oxygen na -arụ ọrụ dị ka radicals free hydroxyl na radical free peroxy, nke kwekọrọ na isi ihe na -egbu nje bacteria na ahụ mmadụ, na -esite na mbibi na ikesa mmiri. Ọrụ nsị nke ihe ikuku oxygen ndị a na -arụ ọrụ dị elu karịa nke chlorine dioxide dị ọcha. Ọbụlagodi nke kacha sie ike igbu ụdị nje bacteria nke endospores dị n'ụwa, ROS nwere ike wepu ha ozugbo. (ROS oxygen na-arụ ọrụ nwere ọrụ dị elu na obere oge ndụ. Naanị ọnụọgụ ọnụọgụ dị nso na ihe eji arụ ụlọ).
COVID-19 nwere ike ịdị ndụ na nri ogologo oge. Ngwaahịa a nwere ike igbu COVID-19 na ụdị ya?
Agbanyeghị, na Febụwarị 4, 2020, Kọmịshọna Ahụike Mba nke China wepụtara “Ọkwa na Ndepụta Mberede nke ụfọdụ ndị na -efe efe n'oge Mgbochi na Njikwa Ọria Coronavirus Pneumonia Ọhụrụ”, edepụtara ọgwụ na -egbu chlorine dị ka ngwaahịa mberede ka a ga -eji. ; 2020 Na Febụwarị 19, 2005, Kọmịshọna Ahụike Mba nke China wepụtara "Ntuziaka maka iji ndị na -efe efe" na nzaghachi ọrịa ahụ, nke depụtara ọgwụ dị iche iche eji egbu coronavirus ọhụrụ. N'ime ndepụta ahụ, ekwuru na ihe na -egbu chlorine dioxide dị mma maka nsị ikuku.
Site na nkwupụta gọọmentị dị n'elu, ọ na -egosipụta n'ụzọ na -apụtachaghị ìhè ịdị irè nke ngwaahịa a na -egbu Coronavirus ọhụrụ, na n'otu oge ahụ, ROS nwere arụmọrụ nsị dị elu.
Azịza: Imirikiti ngwaahịa ndị dị n'ahịa a kewara ekewa n'ime ụdị nnabata isi na ụdị mkpuchi isi. Ngwaahịa ndị a enweghị ike idozi isi ihe na-akpata ọgbọ na-aga n'ihu na nchịkọta isi na isi dị iche iche na friji-uto nke nje bacteria na ebu. Ya mere, na mgbakwunye na enweghị ike nke mwepụ isi ma nwee naanị mmetụta dị mkpirikpi, enweghị mmetụta nchekwa ọhụrụ.
Enwekwara ụfọdụ ihe nchekwa friji na deodorizing ngwaahịa nwere hypochlorous acid na chlorine dioxide fungicides n'ahịa, mana njedebe dị na teknụzụ na -enye windo dị mkpụmkpụ nke ịdị irè. N'otu oge ahụ, hypochlorous acid nwere ogo nsị, na sọlfọ dioxide naanị sterilization anaghị arụ ọrụ nke ọma karịa ngwaahịa anyị, yabụ achọrọ oke itinye uche. Oke oke ịta chlorine dioxide abụghị nhọrọ ka mma.
Ihe arụpụtara n'ime FAUCI AAPG dị na FAUCI Fridge Deodorizer & Freshener na-anabata teknụzụ oxygen na-arụ ọrụ ROS dị elu na teknụzụ nje na-ewepụta ngwa ngwa na-ewepụta onwe ya nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara, nke nwere ike jiri nwayọ na nwayọ hapụ mpekere ikuku chlorine dioxide dị ọcha na arụ ọrụ nke ọma. ions ruo ogologo oge.
Ihe na -emebi ihe nke FAUCI Fridge Deodorizer & Freshener bụ chlorine dioxide dị ọcha na oxygen ROS na -arụ ọrụ, nke nwere arụmọrụ na nchekwa dị elu; ebe ngwaahịa ndị ọzọ enweghị ROS oxygen na -arụ ọrụ, enwere ike ịnwe hypochlorous acid, chlorine na ihe ndị ọzọ na -egbu egbu nke mmachi mmadụ machibidoro iwu, nke na -abụghị naanị nwere arụmọrụ dị ala, kamakwa o nwere ihe egwu nchekwa;
UC FAUCI Fridge Deodorizer & Freshener nwere mmetụta na-aga n'ihu ruo ọnwa 3, ebe ngwaahịa ndị ọzọ kacha karịa ọnwa 1-2.
Maka ngwaahịa ụfọdụ na -eji ozone, isi nsogbu bụ na ozone na -egbu egbu, na -akpasu iwe ma na -emebi gburugburu. Ngwaahịa anyị anaghị emepụta ozone ọ bụla.
Ngwaahịa a enwere nchekwa maka ahụ mmadụ na ngwaahịa nri?
Azịza: Ọdịdị oxygen na-arụ ọrụ ROS nke arụpụtara n'elu ihe arụpụtara n'ime FAUCI AAPG nke ngwaahịa a bụ otu ihe kacha mkpa na enweghị ikewa n'ahụ mmadụ nke na-egbu nje na nje. Ọ bụkwa ihe ebumpụta ụwa ma dịkwa n'ime akara. Ọ bara uru na adịghị emerụ ahụ mmadụ, ọ bụkwa nke na-adịghị egbu egbu na enweghị mmerụ na nri;
N'otu oge ahụ, FAUCI Fridge Deodorizer & Freshener (ihe FAUCI AAPG wuru n'ime) agabigala ule CMA/CNAS dị mkpa: nnukwu nnwale nnwale nsị na-egosi na ọ naghị egbu egbu; mmechi ule micronucleus sel bụ ihe ọjọọ niile, nke pụtara na enweghị mmụba anụ ahụ selụ na enweghị nsí mkpụrụ ndụ ihe nketa;
Kedu ule na asambodo ngwaahịa a nwere ugbu a?
Azịza: Ngwaahịa anyị agabigala nyocha dị mkpa nke ngalaba asambodo CNAS nke mba ụwa, wee nweta asambodo EU CE-ROHS, asambodo FDA, asambodo MSDS, Nnwale nnwale nsị nsị, H1N1 Akụkọ Nje Virus, Akụkọ Nleta Nje Virus, Staphylococcus Albus Test Report, Human Akụkọ nyocha Enterovirus 71, Akụkọ nnwale Escherichia Coli.
Kedu ihe akpachapụ anya na iji ngwaahịa a?
Azịza: eAma mara ka mmiri ghara ịsacha ya. Karịsịa, ọ dị mkpa igbochi ịkpọtụrụ uwe, akpụkpọ anụ, na igwe mgbe ekpughere ya na mmiri dị ka mmiri ga -eme ka mbelata ngwa ngwa nke ngwa ahụ dị ngwa. Enwere ike ịzụrụ ngwaahịa ọhụrụ dịka ya si dị;
Enweghị ike ịbanye ihe nhicha ahụ nke etinyere n'ime ya;
A gaghị agwakọta ya na ihe ndị na -egbu egbu alkaline ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
④ Mgbe emepeghị akpa ahụ mechiri emechi, akpa ahụ nwere ihe dị elu karịa. Mgbe imepechara akpa ma wepụta ngwaahịa a, tinye ikuku n'ime ikuku ruo nkeji 1 ruo 5. Mgbe e gbubisịrị isi, a pụrụ iji ya mee ihe.